Daadad sababay roobab xoog leh oo ka da’ay dalka Sudan oo waxyeello ballaadhan u gaystay dalaggii beeraha - Horn Future
Daadad sababay roobab xoog leh oo ka da’ay dalka Sudan oo waxyeello ballaadhan u gaystay dalaggii beeraha
Khartoum-Daadad ay sababaan roobab xoog leh oo ka da’ay gobolka Sannaar ee koonfur-bari ee dalka Sudan ayaa waxa ay waxyeello ballaadhan u gaysteen dalaggii beeraha ee qaybo kamid ah dalka Sudan.
Wasiirka Beeraha ee gobolka Sannaar Bahaa-uddin Axmed al-Xaaj ayaa sheegay in dhul aad u balaadhan iyo mashaariic dhowr ah oo kuyaala darifyada wabiga Blue Nile in ay gabi ahaan ay noqdeen kuwo soo saarkoodu uu joogsaday.
Masuulkan ayaa mar uu warbaahinta la hadlay cadeeyay in dhul aad u balaadhan oo lagu qiyaasay in ka badan 11 kun oo hektaar ay soo gaadhay waxyeello, halka khasaarahu uu kor u dhaafay 800 oo malyuun oo giniga Sudan ah, waxana uu xaqiijiyay in tallaabo ay qaadi doonaan si loo yareeyo khasaarahan.
Sida laga soo xigtay madaxda degaanka gobolka Sannaar ayaa sheegay in heerka burburka ee ay sababeen daadadkani ay dhaaftay awooda gobolka,iyaga oo carabka ku adkeeysay gargaarka ay bixiyeen in uu yahay mid aad u yar marka la barbar dhigo khasaaraha ay sababeen daadadkani.
Gobolka Sannar ayaa ah mid kamid ah gobolada laga soo saaro muuska ugu badan ee dalka Sudan,kaasoo soo saarkiisa sanadlaha ah lagu qiyaasay in ka badan 120 kun oo tan.
Gobolkan Sannaar ayaa waxa uu ku tiirsan yahay bacriminta dabiiciga ah waxana ku dhawaad 30 kun oo tan oo muuska laga soo saaro loo dhoofiyaa dalalka Carabta iyo Yurub, laakiin daadadka sannadkan ayaa waxa ay caqabad aad u weyn ku noqdeen dhoofinta muuskan.
Daadadkan ka dhashay wabiga Blue Nile ayaa sidoo kale waxa ay sababeen barakaca qoysas tiro badan oo ku nool gobolka jasiiradda ee kuyaala badhtamaha dalka.
Dowladda Sudan ayaa waxa ay kula talisay dadka deggan tuulooyinka ku yaal agagaarka wabiga Blue Nile iyo wabiga cad in ay ka foojignaan daadad ay ku tilmaamtay kuwo aanan hore u soo marin dalka imika ka hor.
Daadadkan oo wali halis ku haya qiyaastii ku dhawaad 100 tuulooyin ah oo ka tirsan goboladda Jasiira iyo wabiga cad ayaa waxa ay burburiyeen tiro aqalo ah oo kuyaala koonfurta magaalada caasimada ah ee Khartoum.
« In ka badan 350 oo arday ah oo iska ga baxay dugsiyada ku xidhan fatxullah Gulen ee kuyaala dalka Danmark	» Stephen O’Brien: Waxa ka dhacaya Xalab maanta “Waa fadeexad guud ahaan ku dhacday akhlaaqda bini’aadantinimada”